မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးတဲ့ အနုပညာရှင်များ / အနုပညာရှင်များ၏ Facebook
ယနေ့၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ဟာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၇၆) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တနိုင်ငံလုံးမှ ပြည်သူများက “ပန်းသပိတ်”ကို ဆင်နွှဲနေကြပြီး၊ အနုပညာရှင်များကလည်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားများ အသီးသီး အခုလိုပဲ ဆိုထားကြပါတယ်။
“Love can’t be Forced. Happy Birthday To Our National Mom. အမေ သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ အမြန်ဆုံးလည်း လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ”
“အမေ ကျန်းမာပြီး သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ။ အမေ့ သားသမီးတွေလည်း အမေ့ကို လွမ်းလှပြီ အမေ။ You are the one and only irreplaceable leader.”
“Happy Birthday Our Leader. အသက်ရှည်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်းတို့နှင့်အတူ အချုပ်အနှောင် အတားအဆီး ခံထားရခြင်းမှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။ ဝဋ်ကြွေးရှိပါက အမြန်ဆုံး ကျေပါစေ”
“Happy birthday ပါ အမေစု။ ဒီမွေးနေ့မှစလို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ တရားမျှတသော နိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်စေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။ ကျမရဲ့ သမီးလေး Zakera ကိုတောင် မွေးနေ့ကို အမေနဲ့ တရက်တည်း တူအောင် မွေးထားတာနော်။ Happy 18th birthday my daughter Zakera. I love you with all my heart.”
“မွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည်ပါစေ အမေ။ အမေ ကျန်းမာပါစေ”
“ကျနော်တို့ ချစ်ရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် အမေစု သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ။ မွေးနေ့မှ စပြီး အခုရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မတရားမှူများ၊ အခက်အခဲများမှလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။ အမေစု မွေးနေ့မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေအားလုံး ဆုတောင်းများအားလုံး ပြည့်ပြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ”
Topics: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, ပန်းသပိတ်, မွေးနေ့, မွေးနေ့ဆုတောင်း, အနုပညာရှင်